Mitambo mishanu yakasarudzika yekutenderera pane yako iPhone | IPhone nhau
Dzimwe nguva isu hatisi kutsvaga mutambo weedu mbozhanhare ine nyaya yakanyanyisa kuvandudzwa, uye hatisi kutsvaga mifananidzo inotyisa, isu tinongoda mutambo unotibatsira kushandisa iwo mashoma maminetsi atinozvipira kune veruzhinji kutakura kana kujairika kumirira, iyo ine inozivikanwa hupenyu hwedu hwese semitambo yemavhidhiyo, yakajairika, iyo inotibvumidza kuti tizvitsause kwenguva pfupi, asi usave chimwe chinhu chaticharasikirwa nacho. Sezvo muActualidad iPhone tinoda kuita basa rezvemagariro, Nhasi tirikukurudzira mitambo mishanu yemahara uye yakasununguka yekushandisa nguva yako wakafa, uye kana iwe usingade iwo andinofunga ... Tora mukana bhokisi remashoko kukurudzira rako!
Nekudaro, pasina kumwe kunonoka, ngatiendei kune yekutanga pane iyo runyorwa, ngatiendei nemitambo mishanu yakasarudzika yakagadzirirwa kuuraya nguva chaiko.
2 100 Mabhora
3 Tap Tap Tap Dash
Takatanga neimwe yevakakurumbira, ikozvino iri pakati pevashanu vepamusoro muApple App Store, uye Etermax inonyatsoziva maitiro ekubatiswa pamitambo yayo yemagariro. Este Vakabvunzwa inogara nhaka yakanakisa yeChishoma (iyo pfungwa), uye inoisanganisa zvakakwana ne mobile technology iyo yatinogona kuwana nhasi. Nenzira iyi, Vakabvunzwa Izvo zvichatibvumidza isu kuita majana ekutamba mukutenderera, chinangwa ndicho chechinyakare, kupindura mibvunzo yetsika yakajairwa nechinangwa chekugona chimwe nechimwe chezvidzidzo zvitanhatu uye kukunda muvengi wedu. Iwo wakasununguka asi unotsigirwa-nemutambo mutambo uyo une kunyorera kweApple Watch uye izvo zvinokuvaraidza iwe kupfuura zvakakwana.
Mumwe mutambo wakasununguka uri pakati peakanyanya kurodha pasi kubva kuApp App Store, yatinotaura nezvayo 100 Mabhora, mutambo unosanganawo nezvinodiwa zvemusoro wakapusa, mamwe magirazi achapfuura nenzira yakarongeka, saka Tichafanirwa kuvhura midziyo yebhora panguva chaiyo yekuzadza magirazi akawanda sezvinobvira uye nokudaro kuwedzera zvibodzwa, kana kurasikirwa nemabhora akawandisa. Iyo ndiyo yakavandudzwa vhezheni yemutambo waivapo kare uye kuti vazhinji venyu muchatoziva kare. Iyo inokwanisa kundiburitsa mumabhokisi angu pane inopfuura kamwe chiitiko, saka ini handikurudzire kune avo vashandisi vane nyore kutsamwa
Tap Tap Tap Dash
Bata, famba, tendeuka uye usadonhe ... Dingindira re Tap Tap Tap Dash zvakare zvakareruka zvisingaite, mavara akapfava uye dhizaini yakanangana nekutitendera kufamba, svika kure sezvinobvira pasina kudikanwa kwekutyora musoro wako. Zvinoenderana zvakanyanya nekukasira kwaunoita iwe usingazivi pane kugona kwepfungwa kwauinako, kiyi ndeyekuti uve nemafungiro endarama. Izvo zvakare zvinotevera iyo freemium modhi yakajairika nhasi, uye iri kuwana maficha maficha muongororo, ini ndoda kutaura zvakanyanya uye zvirinani nezvazvo, asi hapana zvakawanda zvekukwaya, kubata skrini uye kungonakidzwa.
Tap Tap Tap Dashvakasununguka
Ndakaikurudzira kanoverengeka uye handizoregi kuzviita, yechinyakare chikoro maitiro, isu tichafambira mberi, kazhinji nekuwedzera kuoma uye dzimwe nguva nezvishoma. Nekudaro, iro dambudziko hombe rinoratidzwa mukuti kana tikatadza uye tikapera hupenyu, isu tinodzokera pakutanga. Naizvozvo, mu Tigerball bhora rega rinoverenga. Chii chimwe, Kana tikagadzira makomba pakati pematengu matatu kusvika mashanu, minigame ichavhurika iyo ichatibvumidza kuwana hupenyu hunosvika mashanu uye bhomba. Iyo bhomba ichatishandira isu pamatanho atinomira uye tisingakwanise kufambira mberi, tichaishandisa tisati tarasikirwa nehupenyu hwese.
Iyo haina chakawandisa chakawandisa, zvisinei, iko kuchembera kukuru. Kana tikawana hupenyu hwakaringana tinogona kunatsiridza hunyanzvi hwedu kupfuura zvataifungidzira.
Mumhanyi asingagumi wekupedzisa nhasi kupa, mumwe mutambo wevhidhiyo yemahara uyo chinangwa chake ndechekumhanya nekukurumidza sezvatinogona uye nekuenda kure kwazvo tichidzivirira zvipingaidzo zvekare zveiri mhando yemutambo. Kugadzirirwa kwakanaka uye zvishoma kuti ubvunze nezve yakapusa asi inonakidza mutambo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Mitambo mishanu yakasarudzika yekutenderera pane yako iPhone
Tim Cook Anopa Al Gore Nyowani Yekushanduka Kwemamiriro ekunze Chinyorwa